Kusho ukuthini ukulawula isifo sikashukela? Iziphi izici ezidinga ukubhekwa njalo?
UKULUNGA OKUHLE KWESIFO SAMAHHALA Namuhla, abantu abasha abanesifo sikashukela banamathuba amaningi okuphila okude nokwanelisayo ngaphandle kwezinkinga ezinkulu zesifo sikashukela, inqobo nje uma bebandakanyeka ekwelashweni kwalo. ...
Yini “ushukela omkhulu” kanye “noshukela ophansi” oyingozi empilweni? Ukulimala ushukela womzimba Wademoni futhi wabizwa imbangela yalolu bhubhane lokukhuluphala. Kepha ushukela awunampilo ngempela? Ngabe wonke ushukela uyafana? Yilokho isayensi ekushoyo. ...
Ushukela wegazi - indlela yokukala izinga layo nokuthi kubiza malini? Isifo sikashukela yisifo esingelapheki, okungukuthi, singelapheki, kepha siyakwazi futhi kufanele silawulwe! ...
Inkampani yeGlucometer - ELTA - Satellite Plus
Imiphi imitha ongayithenga yinhle. Ungayihlola kanjani i-glucometer ngokunemba i-Glucometer iyithuluzi lokulawulwa okuzimele kwekhaya kwamazinga kashukela wegazi. Ngohlobo 1 noma isifo sikashukela sohlobo 2, kufanele uthenge i-glucometer futhi ufunde ukuyisebenzisa. ...
Kungani ukukhuluphala nesifo sikashukela Ukukhuluphala nesifo sikashukela kubonakala cishe njalo, ngoba i-insulin inomthelela ekuqongeleleni kwamafutha. Amaphawundi angeziwe ikakhulukazi aqongelela esiswini, azungeze izitho zomzimba. ...
Yiziphi izivivinyo okufanele uzenze uma usola isifo sikashukela? Siphakamisa ukuthi ufunde i-athikili ngesihloko esithi: "yiziphi izivivinyo okufanele uzenze uma usola isifo sikashukela" ngamazwana abawasebenzisayo. ...
Ngabe ushukela ushintsha ingcindezi?
Ukucindezela kwesifo sikashukela i-mellitus Ngokusho kwezibalo, umfutho ophakeme wesifo sikashukela ukhuphuka ngezikhathi ezi-3-5 ingozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo esibulalayo, ngezikhathi ezi-3 kuya kwezi-4 -ukushaywa unhlangothi, kuze kufike ezikhathini ezingama-25- ukwehluleka kwezinso. ...
Ama-glucometer lancets - yini? Isifo sikashukela i-mellitus sivame kakhulu kunokuba besingathanda. Ngalesi sifo, ukuphazamiseka ohlelweni lwe-endocrine kwenzeka. ...
I-van touch khetha ne-Ultra glucometer ukuthi uyini umehluko
Imiyalo yokusetshenziswa kwama-lancets e-glucometer Van Touch Select Iminyaka eminingi, yangaphumelela ukulwa ne-DIABETES? Inhloko Yesikhungo: “Uyokumangaza ukuthi kulula kanjani ukwelapha isifo sikashukela ngokusithatha nsuku zonke. ...
Imvelo yoshukela wegazi emadodeni
Yiliphi izinga likashukela wegazi elijwayelekile emadodeni? Impendulo yombuzo wokuthi kungani abantu besifazane bekhula ngokushesha ukwedlula abesilisa, ochwepheshe abavela e-Austria banikeza. ...
Inkampani yeBayer kanye nemitha yeglucose Contour TC. Izinzuzo, izindleko * Intengo esifundeni sakho ingahluka. Thenga izibuyekezo zobuchwepheshe bokubuyekezwa I-Glucometer Contour TS (Contour TS) isebenza kubuchwepheshe obusha obunika imiphumela esheshayo. ...
Kuyini i-glycemia, ukuyiqapha, nokuthi ungayigcina kanjani idayari yesifo sikashukela .. I-Glycemia (ehunyushwe isuselwa esiGrekini. I-Glykys - "imnandi", haima - "igazi") iyinkomba yokugxila kwe-glucose egazini. Izinga lokuzila ukudla kweglycemia liyi-3.3 - 6.0 mmol / l. ...
Ama-C-peptides ku-mellitus yesifo sikashukela - amanani akhula futhi ancipha ekuhlaziyeni
Ukunqunywa kwe-C-peptide ku-mellitus yesifo sikashukela Ekuxilongeni isifo sikashukela, kubalulekile ukunquma inani elikhulayo le-glucose egazini. ...
Imichilo yokuhlola "i-Bioscan": umgomo wokusebenza Ucwaningo lweLabhoratri luyimpumelelo enkulu yesayensi, kubandakanya nomuthi. Isikhathi eside, bekubonakala sengathi ayikho enye indawo yokuvela ngokuqhubekayo. Bese kufike iphepha lesikhombisi. ...
Yimuphi udokotela ophatha iziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus, izimbangela zokuthuthuka kwe-pathology kanye nokuxilongwa
Ikhasi lasekhaya Sanibonani nonke! Ngiyajabula ukuthi uye kwisiza sami ukuthola imininingwane. Ngokuzimisela nangokuzimisela, ngiqoqe zonke izindatshana, azange ngenze amaphutha noma amaphutha angenaphutha. ...
Ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-Glycated
I-Glycated hemoglobin assay (HbA1c) I-Glycated hemoglobin assay idlala indima enkulu ekuhlolweni kwesifo sikashukela. ...
I-Electrochemical glucometer [hlela | hlela ikhodi] Thola ukuguquka kombala kwendawo yokuhlola, okuvela ekuphenduleni kwe-glucose enezinto ezikhethekile ezifakwe emugqeni. ...
Iphutha leseva yangaphakathi Iseva ihlangabezane nephutha langaphakathi noma ukungaqondani kahle futhi ayikwazanga ukuqedela isicelo sakho. ...
Ukubuza komthengi: Izici zokuqhathanisa zama-glucometer Ekufakweni kwemishini yezokwelapha yanoma yiliphi ikhemisi, elinye lamacandelo amele kakhulu ama-glucometer. ...
Izinga le-Urine Ushukela
Ushukela kumchamo (glucosuria): siyini isimo sengozi? Namuhla, cishe nganoma yisiphi isifo, kufanele kuthathwe ukuhlolwa komchamo ojwayelekile. ...